सेप्टेम्बरमा जन्मनेहरू स्वार्थी तर संघर्षशील हुन्छन् ! | Kendrabindu Nepal Online News
सेप्टेम्बरमा जन्मनेहरू स्वार्थी तर संघर्षशील हुन्छन् !
१८ भाद्र २०७६, बुधबार ११:१०
तपाईंको जन्म कुनै पनि वर्षको सेप्टेम्बर महिनामा भएको हो भने ज्योतिषशास्त्रले भन्छ कि तपाईं मनको अत्यन्त कोमल एवं उदार तर एक प्रकारको विशेष सनकले युक्त हुनुहुन्छ ।
सेप्टेम्बरमा जन्मनेहरूमा आफूलाई माया गर्ने स्वभाव हुन्छ, कसैले आफ्नाविरुद्ध अलिकति पनि केही भनेको खण्डमा यिनीहरू नराम्रोसँग भड्किन्छन् । यो महिनामा जन्मनेहरूमा अन्यको तुलनामा सिक्ने क्षमता बढी हुन्छ ।
आफूलाई कसरी अघि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा यिनीहरूले राम्रोसँग जानेका हुन्छन् । आफ्नो प्रगतिका लागि स्वार्थी हुनुपरे पनि पछि हट्दैनन् ।
नजिकका साथीहरूलाई समेत यिनीहरूको मनमा के चलिरहेको छ भन्ने कुराको सुइँकोसम्म हुँदैन । सधैं सँगै हिँड्ने साथीले समेत यिनले के गरिरहेका छन् भन्ने कुराको भेउ पाउँदैनन् । अचानक कुनै ठूलो उपलब्धि हात पारेपछि मात्र मित्रवर्गले थाहा पाउँछन् र उनीहरू चकित पर्छन् ।
सेप्टेम्बरमा जन्मनेहरूलाई रिसाउने मामिलामा कसैले जित्न सक्दैन । तर अचम्म के भने यिनीहरू आफूलाई निकै विनम्र छु भन्ठान्छन् । यिनीहरूको नसानसामा तानाशाही प्रवृत्ति भरिएको हुन्छ । अरूबाट काम लिनु छ भने यति विनम्र एवं लिच्चड बन्न सक्छन् कि किर्नो झैं टाँसिइरहन परे पनि आफ्नो काम पूरा नभई पिछा लाग्न छाड्दैनन् । आफ्ना नजिकका मानिसहरूसँग ठूलो अपेक्षा राखेका हुन्छन् । यहाँसम्म कि प्रेम अभिव्यक्त गर्न समेत आफू अघि सर्दैनन् । अहंकार बढी हुन्छ यद्यपि अत्यन्त ऊर्जाशील हुन्छन् ।
सेप्टेम्बरमा जन्मनेहरू कुनै काममा लागे भने यसरी लाग्छन् कि भोकप्यास सहेर भए पनि थालेको काम पूरा नगरी छाड्दैनन् । दुर्गुण भनौं वा के भनौं यिनीहरूलाई सदैव अरूले आफ्नो प्रशंसा गरिदिऊन् भन्ने लाग्छ । प्रशंसाको भोका हुन्छन् तसर्थ यिनीहरूको कामगराइ पनि अरूले देख्ने खालको वा मार्केबल हुने गर्छ । आफ्नो कामको झ्याली पिटाउन माहिर हुन्छन् । यद्यपि कतिपयले यिनीहरूको यस्तो कमजोरीको फाइदा समेत उठाउन र घात गर्नसक्ने भएकाले सतर्क रहनु आवश्यक हुन्छ ।
सेप्टेम्बरवालाहरूबाट कसैले केही लिएर पचाउँला भन्ने नसोचे पनि हुन्छ । आफूले अरूलाई सापटी दिएको कुरा कसरी उठाउनुपर्छ भन्ने कुरा यिनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा हुन्छ । यिनीहरू त्यसका लागि अनेक हथकण्डा अपनाउन सक्षम हुन्छन् ।
सेप्टेम्बरमा जन्मनेहरूको जीवन संघर्षशील हुन्छ । विशेष गरी करिअर राम्रो छ भने प्रेमको मामिलामा पछि परेका हुन्छन् अनि प्रेम सम्बन्ध राम्रो छ भने विवाह सजिलै हुन सक्दैन अर्थात् जीवनमा केही न केही रोकावट अथवा अड्चनको सामना गरिरहनुपर्ने हुन्छ । यो भनाइलाई कसरी पनि बुझ्न सकिन्छ भने यो महिनामा जन्मनेहरूको जीवनको कुनै एक क्षेत्रमा सदैव खालीपन रहिरहन्छ ।
यो महिनामा जन्मनेहरूलाई असन्तुष्ट प्राणी भन्दा कुनै फरक पर्दैन । हरेक समय केही नयाँ कुरा प्राप्त भएन भने कुण्ठित भइरहन्छन् । यिनीहरूको जीवनमा यौनसम्बन्ध राख्ने अवसर कुनै न कुनै रूपमा आई नै रहन्छ तर पदप्रतिष्ठा वा अन्य कुनै कारणले गर्दा कहिल्यै त्यसको भरपूर आनन्द उठाउन सक्दैनन् ।
केही अवगुणलाई छाड्न सक्ने हो भने सेप्टेम्बरमा जन्मनेहरू असल मानिसका रूपमा विख्यात हुनसक्छन् । यिनीहरू उत्कृष्ट गायक, लेखक, सम्पादक एवं वैज्ञानिक हुनसक्छन् ।
सेप्टेम्बरमा जन्मने युवतीहरू आफूलाई परम ज्ञानी सम्झन्छन् । धेरैजसो सच्चा प्रेम पाउनबाट बञ्चित रहन्छन् । यताको कुरा उता अनि उताको कुरा यता गर्ने मामिलामा एक नम्बरका हुन्छन् । यद्यपि यिनीहरू विलक्षण प्रतिभाका धनी हुनुका साथै कुनै एक खास गुणले युक्त हुन्छन् । तथापि अभिमानका कारण उक्त गुणको सदुपयोग गर्न सक्दैनन् ।
यिनीहरू अप्रतिम रूप एवं सौन्दर्यका मालिक हुन्छन् तर प्रेमको सन्दर्भमा एक नम्बरका बेवकूफ हुन्छन् । आफ्नो भएभरको सबै कुरा लुटाएर पनि खुसी मान्छन् । सच्चा प्रेमको परख गर्न जान्दैनन् अनि गलत व्यक्तिसँग सम्बन्ध गाँसेर आफ्नो जीवन बर्बाद पार्छन् ।
यो महिनामा जन्मने केही युवतीहरूको मन भने सिसाझैं सफा हुन्छ । सांसारिक छलकपटबाट टाढै रहन्छन् अनि अन्यायका विरुद्ध लड्नुपर्दा हिंस्रक सिंहिनी झैं बन्दछन् ।
सेप्टेम्बरमा प्रथमपटक धर्ती टेक्नेहरू आफूले गरेका सबै कुरा बिर्सन्छन् तर अरूले आफूमाथि गरेका व्यवहार सुकासुकाको हिसाब राख्छन् । बोली कडा तर व्यवहार मधुर यिनीहरूको विशेषता हुने गर्छ । असल साथीको साथ निर्वाह गर्नसक्ने क्षमताको विकास गर्ने हो भने यिनीहरूको जीवन आनन्दमय बन्दछ तर यसका लागि मतलबी मानिसहरूको चंगुलबाट उम्कन सक्नुपर्छ । अन्यथा जीवनमा एक्लै बस्नुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिँदैन ।
भाग्यशाली अंक : ३, ७ र ९,
भाग्यशाली रंग : कालो, समुद्री हरियो र सुनौलो
भाग्यशाली बार : आइतबार, बुधबार र विहीबार
भाग्यशाली रत्न : पन्ना र मोती
असन्तुष्ट प्राणी, परम ज्ञानी, विलक्षण प्रतिभा, संघर्षशील, सेप्टेम्बरमा जन्मनेहरू
Prevरक्सी खाएको भन्दै आमाले गाली गरेपछि छोराले गरे आत्महत्या
मलेसियामा नेपाली गार्डले गरे सुपरभाइजरको हत्या, ३ जना पक्राउNext